တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: သရဲများနဲ့ ကျမ
Posted by မေဓာဝီ at 9:36 PM
10/30/2010 9:48 PM
အဟမ်း။ ဇာတ်လမ်းတောင် မစရသေးဘူး။ ပထမပိုင်းက ပြီးသွားပြီ။ :P
သရဲမကြောက်ဘူး။ လူပဲကြောက်တယ်။ အဟုတ်။
သရဲက ကိုယ့်ကို အန္တရာယ် မပြုနိုင်ပဲ လူက တကယ် အန္တရာယ်ပြုနိုင်လို့။
ဘယ်တော့များ သရဲအစစ်နဲ့တွေ့မလဲ တွေ့မလဲနဲ့ ဖတ်သွားတာ လက်စသပ်တော့ Halloween ကို ကြိုဆိုလိုက်တာကိုးးးးးးးးး
ကြောက်တောင် မကြောက်လိုက်ရတော့ မတန်ဘူး ဖြစ်သွားတယ်.. နောက်တစ်ခါ တကယ့်သရဲအစစ်အကြောင်း ကိုယ်တွေ့ကို ရေးပြီး အကြွေးပြန်ဆပ်ပါ မမေ..း))
10/30/2010 11:28 PM
ကမဲ့ သရဲလဲ ဘယ်ရောက်သွားသလဲ မသိဘူး..
10/30/2010 11:52 PM
မေဓာရယ်... ဆန့်တငင်ငင်ကြီးဖြစ်အောင်လုပ်ရက်တယ်။ တစ်ခါထဲ ရေးလိုက်ရင် ပြီးရော။း))
လမ်းကြုံရင်တောင် မေဓာတို့အိမ်ကို အလည်မလာရဲလောက်အောင် ဖြစ်နေပြီ။ သရဲခြောက်တဲ့ အိမ်ကြီး ဖြစ်နေလို့။
သရဲမြင်ဘူးလားမေးတော့လည်း မမြင်ဘူးကြဘူး ကြောက်လားမေးတော့ ကြောက်တယ်ဆိုကြတယ် မမြင်ဘူးဘဲနဲ့ ကြောက်ကြတာဆိုတော့ တော်တော်ကို သြဇာကြီးမားတဲ့ကောင်တွေနော မမြင်ဘူးဘဲနဲ့တော့ ကြောက်ပေါင်ဗျာ မြင်နေရတဲ့ သရဲထက်ဆိုးတဲ့ကောင်တွေတော့ ကြောက်စ် ခါတော်မှီ ဗျူး ခါတော်မှီ ရာသီစာတွေနဲ့ အဆင်ကိုပြေလို့ စည်းစိမ်တော့ ရာသီစာ ပုရစ်ကြော်တွေ တ၀ကြီးထိုင်လွေးပြီး သရဲဇာတ်လမ်းကို ဆက်မျှော်နေပါကြောင်း
ကောင်းခန်း ရောက်မှ မီးပျက်သွားတယ်။
10/31/2010 1:52 AM
သရဲပါရဂူ ကိုကြီးကျောက် စိတ်ဆိုးသွားပြီ မခြောက်နိုင်လို့ ကျနော် ကတော့မျှော်နေပြီ မနက်ဖြန် ဆိုတာ ဖတ်ချင်လှပြီဗျာ
10/31/2010 2:07 AM
သူများတွေရှေ့ကျရင် မကြောက်သလိုလိုနဲ့ ဘာဖြစ်တယ် ညာဖြစ်တယ်ပေါ့ နောက်တော့တစ်ယောက်တည်း ဖြစ်တဲ့ အခါကျ စောင် ခေါင်းမြီးခြုံပြီး အတင်းအိပ်ရတယ်း) စိတ်ဝင်စားစရာတွေပဲ စောင့်ဖတ်နေမယ် အစ်မရေ့ ။
10/31/2010 2:22 AM
ကောင်းခန်းရောက်မှ နက်ဖြန်မှ တဲ့...။
10/31/2010 5:18 AM
စိတ်ဝင်စားစရာဘဲ တော်ပါသေးရဲ့.နေ့လည် သုံးနာရီလာဖတ်မိပေလို့။
10/31/2010 6:51 AM
I am not scared but I hear them before (many times). I didn't realized it at the time. :-(
10/31/2010 7:26 AM
10/31/2010 9:53 AM
“ကျမ ပျင်းပျင်းရှိရင် … ဒါမှမဟုတ် စိတ်တွေ မျောလွင့်ချင်ရင် အိမ်ရှေ့က သင်္ချိုင်းရှုခင်းကို တကူးတက ကြည့်နေကျပေါ့။” အစ်မမို့ မကြောက်မရွံ့ ကြည့်ရဲတယ်.. သရဲ ဆို အသံကြားရုံနဲ့တောင် ကြောက်တာ.. အခုလည်း နေ့လည်လာဖတ်မိလို့တော်ပါသေးရဲ့ ..
စောင်ခေါင်းမြီးခြုံဖတ်တာ ချွေးပဲ ထွက်သွားတယ် သရဲ တောင် မကြုံလိုက်ရဘူး။
မနက်ဖြန်မှ တခါ ခေါင်းမြီးခြုံရအုံးမယ်။
10/31/2010 3:29 PM
10/31/2010 3:45 PM
ဆက်ရန်ကို မြန်မြန်လုပ်ပါ ကြီးဒေါ် :P
10/31/2010 6:30 PM
ခေါင်းစဉ်တွေ့ပြီး ပထမဆုံးစာပိုဒ်လေးပဲ ဖတ်ပြီး တိတ်တိတ်လေး လှည့်ပြန်သွားတယ်... နောက်တပတ်လောက်မှ သေသေချာချာ လာဖတ်ပါရစေ... အခုရက်တွေမှာ တယောက်ထဲဖြစ်နေလို့ မဖတ်သွားသေးဘူးနော်...
မီးမီး ကြောက် ကြောက်...း))
ဟီး... ဖတ်ရင်းတောင်ကြေည့်မြောက်ကြည့် နောက်ကြည့်နဲ့ လန့်လာတယ်
ဟီး ဗန္ဓုလသွေးနှစ်ပုလင်းပါတဲ့ သတ္တိခဲမို့ပါး)